Who were Bengali, so called Rohingya?: Anti-Rohingha လှုပ်ရှားမှု ထောက်ခံအားပေးသူများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအားလုံးသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Anti-Rohingha လှုပ်ရှားမှု ထောက်ခံအားပေးသူများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအားလုံးသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ကျွန်တော် ပထမဆုံးတောင်းပန်ချင်တာ တစ်ခုက ဒီစာထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ စာဖတ်သူတွေအပေါ် ဆရာလုပ်သလိုမျိုး၊ ပညာရှင်ဆန်ဆန် လူတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြဝေဖန်မိတာမျိုး ပါနေရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရေးသားတင်ပြပုံ အားနည်းမှုလို့ ပဲ မှတ်ယူခွင့်လွှတ်ပေးစေလိုပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်ရေးဖူးသမျှ အကြောင်းအရာတွေ တော်တော်များများဟာ ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းဖူးသမျှ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့အဲဒီအတွေ့ အကြုံတွေထဲက ရလာတဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီး ကျွန်တော်အားသန်တဲ့ သရော်စာအရေးအသားနဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ စာတွေများပါတယ်။ဒီစာအတွက် ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာတစ်ခုက ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်တွန်းအားပေးမှုကနေ ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွေးတစ်ခုလောက်ရစေလိုတဲ့ စေတနာကို ဖတ်ရှုတဲ့လူတွေ အကုန်နားလည်စေချင်တာလေးပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသား facebook user တွေဟာ ဒီရိုဟင်ဂျာဆန့် ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ခဲ့တာ အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးစားခဲ့ကြလို့ လည်း ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်းကြားမှာ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ခိုင်မာလာသလို တချိန်က ဒီလူမျိုးတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို နားမလည် သဘောမပေါက်တဲ့ လူတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ အင်တာနက် စတင်မပေါ်ပေါက်ခင်ကတည်းက ရခိုင်လူမျိုး ပညာရှင်များရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ အတူ ရခိုင်လူမျိုးများ လှုပ်ရှားနေခဲ့တာတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမယ့် ကြိုးစားသလောက် အရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရရဲ့ လျှစ်လျှူရှုမှုကြောင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခွင့် မရခဲ့သလို ပြည်ပမီဒီယာတွေကလည်း ခုလိုပဲ အရေးတယူမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။
ခု အင်တာနက်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ ခရီးပေါက်သင့် သလောက် ပေါက်မြောက်နေခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကြားထဲ အချင်းချင်း အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေ ဝေဖန်စွပ်စွဲမှုတွေကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ဝမ်း ကွဲပြားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနေတာကိုလည်း ၀မ်းနည်းစွာတွေ့ မြင်နေရပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကို လမ်းကြောင်းလွဲစေနိုင်တဲ့အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ် အားလုံးကို နားလည်သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံကို ကာကွယ်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်သူမှ မတိုက်တွန်းပဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ပါဝင်လာကြတဲ့လူတွေပါ။ ဒီအခြေခံအချက်တွေ တူညီနေပါလျှက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဝမ်းကွဲစရာ လိုပါသလား။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူသလို နိုင်ငံရေးခံယူချက်ချင်း မတူတာမှန်ပေမယ့် ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကို ကိုယ်စားပြုနေသူဖြစ်ပါစေ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရပ်ရမှာက တစ်ဘက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို သမိုင်းကြောင်း၊ ဘယ်လိုမုန်းတီး နာကျည်းမှုတွေရှိခဲ့ပါစေ ဒီအချိန်မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အကျိုးဆက်ကို အတူတူခံစားရမှာက ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဆိုတာ နားလည်ပေးကြပါ။
ဒီနှစ်အတောအတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ပထမဆုံးအကြိမ် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံလှုပ်ရှားမှုမှာ စည်းလုံး ညီညွတ်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ အဲဒီတုန်းက အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်အချို့ ကလွဲရင် ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာ၊အတိုက်အခံ အကုန်လုံး ပြည်သူတွေနဲ့ တစိတ်တ၀မ်းတည်း ညီညွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့သလို အင်အားကြီးနိုင်ငံအစိုးရအချို့ ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလို အားလုံး တဘက်တည်းမှာ စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြလို့ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အောင်မြင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာပါ။ ခု ရိုဟင်ဂျာဆန့် ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှာ ဘယ်သူတွေ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရပ်တည်နေကြပြီးပြီလဲ။ ပြည်ပမီဒီယာအများစုက ကျွန်တော်တို့ ကို မျက်မုန်းကျိုးနေကြပါတယ်။ အနည်းစုက ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြပါတယ်။ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကလည်း ရူးချင်ယောင်ဆောင်နကြ ပါတယ်။ ပြည်ပအတိုက်အခံသမားတချို့ က ကျွန်တော်တို့ ကို အစိုးရ လက်ကိုင်တုတ်တွေ၊ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူတွေဆိုပြီး ပက်ပက်စက်စက်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ အချို့ အတိုက်အခံတွေကလည်း အားပေးချင်ပေမယ့် သူတို့ ရဲ့ ဘ၀ရပ်တည်ချက်အရ ဘာမှဝင်ပြောလို့ မဖြစ်ပဲနေရတာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းက အင်အားကြီး နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကလည်း လက်ရှောင်နေကြပါတယ်။ UN အပါအ၀င် NGO တွေကလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကပဲ ရပ်တည်နေကြပါတယ်။ အစိုးရကလည်း အနောက်အုပ်စုနဲ့ ရွှေလမ်းငွေလမ်း ပြန်ဖောက်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်ဖြစ်လို့ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေပါတယ်။ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဆိုတာတော့ ဝေလာဝေးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ ပြေးကြည့်မှ၊လှမ်းအော်ခေါ်ကြည့်မှ ကျွန်တော်တို့ မှာ ဒီအုပ်စုလေးပဲ ရှိသေးတာပါ။ အဲဒီတော့ ဒီရှိစုမဲ့စုအဖွဲ့ လေးသာ ထပ်ကွဲသွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ပါအုန်းမလား။
ဒီအချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေ ဘယ်လောက်ခရီးရောက်နေကြပြီလဲ။ သူတို့ ရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် အမေရိကန်၊ဗြိတိန်စတဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ လွှတ်တော်တွေအထိ သူတို့ ပေါက်ရောက်နေကြပါပြီ။ အာရပ်အဖွဲ့ အစည်းတွေဆီက ထောက်ပံ့ကြေးတွေအလုံးအရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကို ၀ါဒဖြန့် နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားပြီး ပိုတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ပိုတဲ့အချိန်လေးကိုဖဲ့ပြီး facebook ပေါ်မှာ မြန်မာလိုစာရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့က နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ကြေးတွေကို ထိုင်သုံးပြီး ဘာသာစုံရေးထားတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ သနားဂရုဏာကို သဲ့ယူနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဗြိတိသျှသံရုံးရှေ့ မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ မအောင်မြင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲအတွက် လူမရမကစုနေချိန်မှာ သူတို့ က နိုင်ငံတကာကို ကိုယ်စားလှယ်တွေ စေလွှတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ ကို သူတို့ လိုမျိုး ဘယ်သူမှ အလှူငွေလာမပေးပါဘူး။ UN အပါအ၀င် ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကမှ ထောက်ပံ့ကြေးမရပါဘူး။မြန်မာအစိုးရကလည်း အားပေးမှုမရှိသလို ဘယ်နိုင်ငံအစိုးရကမှ ခုချိန်ထိ လက်ခုပ်ထမတီးသေးပါဘူး။ ဒီလောက်နောက်ကျနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်း ခုလိုခြေထိုးနေကြရင် ဘယ်သူတွေ ပန်းဝင်သွားမလဲ။ခု သူတို့ ရဲ့ သမိုင်းလိမ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ထဲက တတ်သိနားလည်တဲ့လူတွေ တော်တော်များများ ဖြေရှင်းတုန့် ပြန်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ သူတို့ ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုလည်း ရှင်းပြကြပြီးပါပြီ။ ကဲ ဒီလောက်နဲ့ လုံလောက်ပါပြီလား။ ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ အင်တာနက်ပုံမှန်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာလူတစ်စု သိပြီးရုံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကျေနပ်သင့်သလား။ ဒီလူမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ပြောနေရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ အားလုံးရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရယူဖို့ ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်က ကျွန်တော်တို့ ခုလုပ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးမှု လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့လူတွေ အကုန်လုံး နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေနေရာမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာဖြစ်တဲ့ သီရိလင်္ကာတွေဖြစ်နေရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုင်းတွေဖြစ်နေရင်လည်း လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ခု မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်နေတဲ့ တရုတ်တွေကိုလည်း ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ တန်းတူ ကန့် ကွက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို အခြေခံတဲ့လူတွေကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လုံးဝမကြိုဆိုပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို အမျိုးသားရေးအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လှိုက်လဲစွာကြိုဆိုပါတယ်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးမှုကို အခြေခံပြီး ရေးသားပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား ဟိန္ဒူ၊ မူဆလင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးခံဘ၀ကိုရောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် တွန်းပို့ လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေကိုယ်တိုင်က ဒီမြန်မာပြည်ဖွား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစုဟာ သူတို ကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်သင့်ခံလိုခြင်းမရှိဘူးဆိုတာ သူတို့ ရဲ့Blog အချို့ မှာဝန်ခံထားတာကိုတွေ့ ဖူးပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဆီကနေ မြန်မာပြည်ဖွား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး စော်ကားမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာတွေက အဲဒီအချက်ကို အမြတ်ထုတ်ဖို့လက်တွန့် နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပြောချင်တဲ့လူတွေကို ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ကျေးဇူးပြုပြီး လက်ရှောင်ပေးကြပါ။ အဲဒီလိုပြောလို့ကုလားတွေနဲ့ မင်းဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲ၊ မင်းနဲ့ ဘာတော်လဲလို့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းမေးလာတဲ့လူရှိရင် အဲဒီလူကို ကျွန်တော့်ဇာတိ မာန်အောင်ကျွန်းအကြောင်း နီးစပ်ရာ ရခိုင်တစ်ယောက်ယောက်ကို မေးကြည့်ပါလို့ ပဲ အကြံပေးပါရစေ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တသက်လုံးစွဲကိုင်လာတဲ့ လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးအစွဲမှန်သမျှကို ဘေးမှာပစ်ချပြီးမှ ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်လာခဲ့တာပါ။ အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ အစွဲအလမ်းကလွဲရင် ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ မိတ်ဆွေတို့ မှာ ကိုယ်စီယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ ဘာသာရေး ၊နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေးအစွဲတွေကို အပြင်မှာထားခဲ့ဖို့ လေးစားစွာတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီခေတ်ဒီကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဒုက္ခရောက်နေသလိုပဲ အဲဒီနယ်စပ်က ဘင်္ဂလီတွေလည်း ဒုက္ခရောက်နေကြတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ သူတို့ ရဲ့ မူလဇာတိဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ သူတို့ တွေထဲက တချို့ ဟာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် နေထိုင်နေကြရသလို ကျွန်တော်တို့ သွေးချင်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အချို့ တွေဟာလည်း အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်အချို့ မှာခုချိန်ထိ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ရပ်တည်နေကြရဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပအခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအရေး ဦးဆောင် လှုပ်ရှားသူတွေက ပြည်တွင်းက ဒုက္ခတကယ်ရောက်နေတဲ့လူတွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး စည်းစိမ်ယူနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ အမေရိကန် ၊ဗြိတိန်၊ သြစတြေးလျတို့ လို ၀င်လာသမျှ နိုင်ငံခြားသားတွေကို လက်ခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာမရှိပါဘူး။ တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကို စာနာထောက်ထားလို့ လက်ခံ လိုက်ရင် နောက်ခံအင်အား အလုံးအရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကို ၀င်ရောက်လာမယ့် ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွခေါင်းဆောင်တွေ ၊နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်မယ့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ အစည်းတွေကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့် ခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ နောင်နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာတဲ့အထိ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ မလွယ်သေးပါဘူး။ လက်ခံလို့ မဖြစ်တာကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သဘောတူကြပြီးပါပြီ။
အဲဒီတော့ လက်မခံဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့သူတို့ တွေကို ကျွန်တော်တို့ မြေကနေ သူတို့ ကိုလက်ခံနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ၊နိုင်ငံသားအစစ်အမှန်နဲ့ တရားမ၀င်ခိုးဝင် အခြေချသူတွေကို စီစစ်ပေးဖို့ စတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာကလက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လက်ခံခြင်း၊ လက်မခံခြင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ချည်းပဲ တသံတည်းထွက်နေလို့ အရာမထင်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာက နိုင်ငံရဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အစိုးရကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုအကူအညီတောင်းမလဲ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဧရာဝတီလှုပ်ရှားမှုကို စံနမူနာယူသင့်ပါတယ်။အဲဒီအတွက် တတ်သိနားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေက နိုင်ငံတကာ ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊အလားတူ Immigrant တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတွေက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓက အထောက်အထားတွေကို ဖော်ထုတ်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစိုးရလည်းလက်ခံ ၊နိုင်ငံတကာကလည်းလက်ခံ ၊ပြည်သူတွေကလည်း လက်ခံလာမှသာ ကျွန်တော်တို့ ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ပြီလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ခုချိန်မှာ ဒီလူမျိုးတွေဟာ ဘယ်နိုင်ငံကမှ နိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုတဲ့ Stateless people တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ နဲ့ လူမျိုးတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကတောင်မှ သူတို့ ကို လက်သင့်ခံလိုခြင်းမရှိပါဘူးဆိုတာ ဒီရက်ပိုင်း မြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးတစ်ဦးကို သူ့ ရဲ့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၀န်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ။နောက်တစ်ခုက ခုလွှတ်တော်မှာ သဘောတူလိုက်တယ်ကြားတဲ့ ဆန္ဒပြခွင့်ဥပဒေအရ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘီဘီစီကို ကန့် ကွက်ဖို့ကန့် သတ်နယ်မြေထဲမှာပါတဲ့ ဗြိတိသျှသံရုံးရှေ့ မှာ ဆန္ဒပြလို့ မရတော့ပါဘူး။နောက်ပြီး အစိုးရကို တောင်းဆိုဖို့ အတွက်လည်း အစိုးရရုံးတွေရှေ့ မှာ ဆန္ဒပြခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ပြည်တွင်း ၊ပြည်ပ မီဒီယာတွေမှာပါအောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို နားလည်နှံ့ စပ်သူများအနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်း အဖြေရှာစေချင်ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီက ရလာမယ့်အကြံဥာဏ်တွေထဲက အစိုးရတင်မက နိုင်ငံတကာကပါ လက်သင့်ခံနိုင်မယ့် အသင့်တော်ဆုံး အကြံပြုချက်တွေကိုရွေးထုတ်ပြီး လွှတ်တော်ထိရောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောရတာကလည်း ကျွန်တော်အနေနဲ့ လက်ရှိအာဏာပိုင်အစိုးရသာလျှင် ဒီကိစ္စမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရှိဆုံးလို့ ရိုးသားစွာ ထင်မြင်မိလို့ ပါ။ စကားမစပ် ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့facebook ပေါ်ကအတွေ့ အကြုံတစ်ခုကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်တော် ဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့ စ်တွေ တင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ လူအယောက် တစ်ရာကျော် နှစ်ရာနီးပါး ကျွန်တော့်ကို လာ Add ကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေလည်းပါပါတယ်။ ကျွန်တော် အကုန်လုံးကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မမျှော်လင့်ဘဲ လာ Add တဲ့လူတွေထဲက တချို့ ဟာ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေဖြစ်နေတာကို အမှတ်မထင် သိလိုက်ရပါတယ်။ တချို့ ဆိုရင် သူတို့ ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ဦးဆောင် လှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်နေတာကိုပါ သူတို့ တွေရဲ့ ဆိုက်တွေကို ၀င်ကြည့်ရင်း အမှတ်မထင် တွေ့ ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီလူတွေထဲက အချို့ ဆိုရင် သူတို့ ရဲ့ ဘာသာ၊ လူမျိုး၊နာမည် ဘာ info ကိုမှ တိတိကျကျ ဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိသလို ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှ ၀င်မပါပဲ ဒီအတိုင်းငြိမ်နေကြပါတယ်။ သူတို့ ဟာ ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာဆန့် ကျင်သူတွေတော်တော်များများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို လာစောင့်ကြည့်နေကြတာကို ကျွန်တော့် block မလုပ်ခင် သူ့ ရဲ့friends list ကိုကြည့်ပြီး သိလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့သတိကြီးကြီးထားဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ ခက်ခဲသလောက် စိတ်ဝမ်းကွဲပြားအောင် သွေးထိုးလှုံ့ ဆော်ဖို့ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဥပမာ.. facebook ပေါ်မှာ နာမည်ရင်း ဟူစိန်အလီလို့ ခေါ်တဲ့ ဘင်္ဂလီတစ်ယောက်ဟာ သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဗမာ ဒါမှမဟုတ် သတိုးမဟာကျော်စွာမင်းခေါင် စသဖြင့် မြန်မာရာဇ၀င်နာမည်တွေနဲ့ ရခိုင်နဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ လူမျိုးရေးသွေးထိုးလှုံ့ ဆော်ဖို့ ဆိုတာ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ ဘွဲ့ နာမည် ဓာတ်ပုံတင်ပြီး မြန်မာမူဆလင်တွေကို ရန်စဖို့ ဆိုတာလည်းတကယ်လွယ်ပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်တွေပေးတတ်တဲ့ နာမည်တွေသုံးပြီး ပြည်ပနိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို သူတောင်းစားတွေလို့ စော်ကားဖို့ လည်း မခက်ပါဘူး ။NLD အလံပုံတင်ပြီး စစ်သားတွေကို စစ်ခွေးလို့ လှမ်းဆဲလို့ လည်းရပါတယ်။ သူတို့ တခါလောက်ဖွလိုက်တာနဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ကြတဲ့ ပြသနာတွေက facebook မှာ အများကြီးပါ။ တကယ်လက်တွဲရမယ့် အချိန်ရောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်အချင်းချင်း တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်မကြည့်နိုင် ဖြစ်နေကြပြီ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက ကိုယ့်လုပ်စာကိုယ်စားပြီး အမျိုးသားရေးကို စိတ်တူကိုယ်တူ လုပ်နေကြတာပါ။ ဒီလူတွေက အလုပ်လုပ်စရာမလိုတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ထက်အချိန်ပိုပေးနိုင်တဲ့အတွက် ပိုပြီးတော့ ထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာ သူတို့ ထက်ပိုမိုထိရောက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုးတွေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ သာမန်လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်နေသမျှ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်နေရအုန်းမှာပါ။
ဘယ်သူဘယ်ဝါဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကိုချစ်လို့နိုင်ငံရေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကိုမုန်းလို့ နိုင်ငံရေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးလို့အမျိုးသားရေးလုပ်ကြတာပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာအပါအ၀င် ဘယ်သူ့ ကိုမှ မုန်းစရာမလိုပါဘူး။ သူတို့ က သူတို့ အခွင့်အရေးနဲ့ သူတို့ လူမျိုး အခွင့်အရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက အခွင့်အရေး တစုံတရာမပါပေမယ့် တမျိုးသားလုံးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းချင်း တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက်ယုံယုံကြည်ကြည် ဆုပ်ကိုင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် မအောင်မြင်စရာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး မျိုးချစ်စိတ်ကိုယ်စီနဲ့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေပွန်အောင် အတူတူ ထမ်းဆောင်ကြရအောင်ပါ။
ဒီရက်ပိုင်းအတောအတွင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာဆန့် ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ မတွေ့ ရသလောက် နည်းပါးနေတာတွေ့ ရပါတယ် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဂယက်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စမှာ အားလုံးကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကြိုးစားပေးကြပါလို့အားကိုးစွာ တိုက်တွန်းပါရစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 3:23 PM
Labels: ပေးစာ, ကြေငြာချက်
ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေး မလုပ်ဘဲနဲ့ ရိုဟင်ဂျာပြသနာ ပြေလည်အောင် အဖြေရှာနိုင်ရေး ဆိုပြီခေါင်းစဉ်ပြောင်း ရင်ကောင်းပါလိမ်မယ်။
The Muslims who claim themselves Burmese should against that so call Rojinja. If they think they are Burmese nationality they have to see that case with the view base on Nationalism, not base on religion.
How can I share this post on my wall?